Carrier အပေါ် 808nm 12W Chip (COC) လေဆာ Diodes ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လေဆာအစိတ်အပိုင်းများ > Submount လေဆာ Diodes အပေါ် chip > Carrier (COC) လေဆာရောင်ခြည်ပေါ် 808nm 12W Chip
Carrier (COC) လေဆာရောင်ခြည်ပေါ် 808nm 12W Chip
Carrier on 808nm 12W Chip on Laser Diodes သည်တန်ဖိုးနည်းစံနိမ့်နိမ့်နိမ့်နိမ့်စံဒီဇိုင်းဖြင့်စွမ်းအားမြင့်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရယူလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ BoxOptronics သည် wavelength range 8XX to 9XX ကိုဖြတ်ပြီး CW နဲ့ pulsed operation နှစ်ခုစလုံးအတွက် single mode တစ်ခုနှင့် multimode devices များအပါအ ၀ င် configurations အမျိုးမျိုးကိုရရှိခဲ့တယ်။ BoxOptronics ၏ COC ကိရိယာများအတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် OEM ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ စုပ်စက်ရင်းမြစ်၊ စစ်ပစ်မှတ်၊ OTDR၊ အကွာအဝေးရှာဖွေခြင်းနှင့်အလင်းရောင်တို့ပါ ၀ င်သည်။ စိတ်ကြိုက်လှိုင်းအလျားနှင့်ပြင်ဆင်မှုများကိုတောင်းဆိုမှုအရရရှိနိုင်ပါသည်။
Carrier (COC) Laser Diodes အပေါ် 808nm 12W Chip ၁။ အကျဉ်းချုပ်
Carrier (COC) Laser Diodes အပေါ် 808nm 12W Chip ၏နိဒါန်း
Carrier ပေါ်ရှိ 808nm 12W Chip ၏ 3. အင်္ဂါရပ်များ (COC) လေဆာရောင်ခြည်
အနိမ့်မှောင်မိုက်လက်ရှိ, အနိမ့် capacitance;
4. Carrier (COC) Laser Diodes ပေါ်တွင် 808nm 12W Chip ကိုအသုံးပြုခြင်း
Carrier (COC) Laser Diodes အပေါ် 808nm 12W Chip ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„) ။
Parameter သင်္ကေတ min ။ စာစီစာကုံး မက်စ် ယူနစ်
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ 803 806 809 nm
optical output ကိုပါဝါ ဖိုး - 12 - W
စစ်ဆင်ရေး mode ကို - CW -
ပါဝါမော်ဂျူလ် - - 100 - %
Electro Optical Data
အမြန်ဝင်ရိုးမတူကွဲပြား (FWHM) ¥âŠ¥ - 34 - deg
အနှေးဝင်ရိုးမတူကွဲပြားခြင်း (FWHM) --â€ - - 10 - deg
ရောင်စဉ်တန်း bandwidth ကို (FWHM) Î” Î» -4- nm
သွေးခုန်နှုန်းလှိုင်းအလျား λ 800 803 806 nm
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု η 1.1 1.2 - W / A
ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု - 50 55 - %
လက်ရှိ Threshold အိုင်တီ - 1.82A
operating လက်ရှိ IOP - 12 13 A
operating ဗို့အား VOP - 1.8 2.0 V
အပူချိန်ဝိသေသလက္ခဏာများ (dÎ» / dT) - - 0.28 - nm / â
polarization ကို - - TE - -
LD Operating အပူချိန် - 15 25 35 ℃
ထုတ်လွှတ်အကျယ် W - 390 - µm
ထုတ်လွှတ်အစေး P - 680 - µm
လိုင်အရှည် L 1990 2000 2010 µm
အထူ D 110 130 150 µm
6. Carrier (COC) Laser Diodes အပေါ် 808nm 12W Chip ပါ ၀ င်သော Package Draw & PIN-OUT အဓိပ္ပါယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ။
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါပုံသည် 4.5 * 4.5 * 0.5 (mm) heat sink ထုပ်ပိုးထားသည်။ ငါတို့သည်လည်း 5.7 * 4.5 * 0.5 (mm) အပူစုပ်ထုပ်ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
7. Carrier (COC) Laser Diodes တွင် 808nm 12W Chip ကိုပို့ခြင်း၊ ပို့ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်အာမခံသက်တမ်း ၁-၃ နှစ်ရှိသည်။ (အရည်အသွေးအာမခံချက်ကာလပြီးနောက်သင့်လျော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေကိုစတင်တောင်းခံခဲ့သည်။ )
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပြီး ၇ ရက်ပတ်လုံးပြန်လာသည့်မူဝါဒကိုကမ်းလှမ်းသည်။ (ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်7ရက်);
ပစ္စည်းချို့ယွင်းချက်ရှိပါကပေးပို့ပြီးနောက်3ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားပါ။
၀ ယ်ယူသူသည်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။
A: 808nm 830nm 880nm 915nm 975nm ရှိတယ်။
A: Box Optronics သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊ တရုတ်လုပ်, စျေးပေါ၊
Submount COS လေဆာ Diode ပေါ်တွင် 915nm 12W Chip
Submount ပေါ် 940nm 12W LD COS လေဆာ Chip
Submount COS လေဆာ Diode ပေါ်တွင် 976nm 12W Chip
808nm 10W CW Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖြာသော Chip
976nm 12W Diode Laser Chip
905nm 25W Pulsed လေဆာ Chip ကို